प्रचण्डको चुनावी रणनीति : कांग्रेस रिझाएर चितवन बनाउलान् त कम्फर्टेबल ? – Nepal Press
झस्किन थाल्यो चितवन कांग्रेस, दिन थाले विद्रोहको चेतावनी
२०७८ भदौ ३१ गते १६:१९
चितवन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको पक्षमा निर्वाचन पार्ने रणनीति कोर्न व्यस्त छन् । उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै कायम राख्ने प्रस्ताव सारेका छन् ।
यो प्रस्तावले चितवनका कांग्रेसी नेताहरू फेरि झस्किएका छन् । पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न घरदैलोमा व्यस्त छन् नेता-कार्यकर्ता । उम्मेदवारहरूको साझा एजेण्डा छ- चुनावी गठबन्धन गरेर अर्को दललाई भोट दिने वातावरण बनाइने छैन । तर, केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिका कस्तो होला ? अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइराला २०७० सालमा सहजै चुनाव जितिने ठाउँ खोज्दै चितवन क्षेत्र नम्बर ४ मा आए । पहिलो संविधानसभामा विजयी माओवादी नेता चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई उनकै चुनावी क्षेत्रमै झण्डै दोब्बर मतले हराए । कोइरालाले १० हजार २१ मतान्तरले हराए ।
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ प्रचण्ड निर्वाचित क्षेत्र हो । २०६४ मा रोल्पा र काठमाडौंमा जितेका प्रचण्ड २०७० मा काठमाडौं र सिराहामा उम्मेदवार बन्दा सिरहामा मात्रै जिते । २०७४ को चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चितवनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी बने । अब हुने निर्वाचनमा पनि सके कांग्रेससहितको गठबन्धन नसकेपनि नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गरेर चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाटै चुनाव लड्ने प्रचण्डको तयारी छ ।
२०७१ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसकै रामकृष्ण घिमिरेले कोइरालाको भन्दा ४ सय ४२ मत कम ल्याएरै एमाले उम्मेदवारलाई ३ हजार ४६ मतान्तरले हराए । माओवादीका उम्मेदवार तेस्रो स्थानमा १२ हजार ४ सय ६३ कम मतले पछाडी परे ।
कांग्रेसले चितवनमा २०५१ मा ३ मध्ये १ , २०५६ मा ५ वटै र २०७० मा ५ मध्ये २ वटा निर्वाचन क्षेत्र जितेको थियो । २०६४ मा ५ वटै र २०७४ मा ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित बन्यो । प्रदेशसभाका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित रह्यो ।
प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस संसद पुनःस्थापनापछि सत्तामा छ । प्रमुख सारथी छन्- माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड । प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चितवनको क्षेत्र नम्बर ३ हो । यो क्षेत्रमा भरतपुर महानगरका केही वडा र माडी नगरपालिका पर्दछ । भरतपुर महानगरमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल मेयर छिन् भने माडी नगरपालिकामा माओवादीकै नेता ठाकुरप्रसाद ढकाल मेयर छन् । स्थानीय तहको चुनावमा रेणु र ढकाल दुवै पुनः मेयरमै उठ्ने चर्चा छ । रोचक के छ भने रेणुलाई मेयर बनाउन खोज्दा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर थियो ।
अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमै पुर्‍याउन-टिकाउन पनि माओवादीकै भूमिका छ । प्रचण्डकै समर्थनमा देउवा चौथो र पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । रेणु र प्रचण्डले भरतपुर र माडीमा विकासका ठूला योजनाहरु नभित्राएका होइनन्, विकासमा उल्लेख्य प्रगति पनि भएकै छ । तर, अब भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाल र क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रचण्डले फेरि अन्य दलको साथ पाउलान् या एक्लै भिडेर निर्वाचित हुन्छन् ? प्रश्न गर्नेहरू धेरै छन् । विगतमा ‘टुरिष्ट’ नेता भनेर आलोचित प्रचण्ड अब चुनावी क्षेत्र नफेर्ने मनस्थितिमा छन् । कारण एउटै छ-निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पालिका प्रमुख दुवै माओवादी नेताकै नेतृत्वमा छ ।
चुनावी तालमेलको चर्को विरोध !
अबको ६ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोल तात्ने पक्का छ । चितवनका कांग्रेस कार्यकर्ता दुई पटक सिद्धान्तविपरीतको दललाई भोट दिएकोमा पछुतो मानिरहेका छन् । कांग्रेसलाई पार्टीभित्रकै चुनावले तताएको छ । दलभित्रकै उम्मेदवारलाई मात्रै संसदीय र स्थानीय तहको चुनावमा भोट दिने वातावरण बनाउन कार्यकर्ताको चर्को माग छ । नेपाली कांग्रेस चितवनको सभापति पदका उम्मेदवार प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरे कार्यकर्ता भएर रुखमा भोट हाल्न नपाउने परिस्थिति आए सशक्त विद्रोह गरिने बताउँछन् ।
‘कांग्रेस भएर रुखमा भोट हाल्न नपाउने परिस्थिति पनि कहीँ हुन्छ ? त्यो अब स्वीकार्य छैन’, उनले भने, ‘केन्द्रीय नेतृत्वले यो कुरा बेलैमा सोचोस् ।’
चितवनका कांग्रेसजन वर्ष २०७४ लाई बिर्सन नसकिने बताउँछन् । यसको कारण हो रुखमा भोट दिन नपाउनु । स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादीको चिन्ह ‘गोलाकारभित्रको हसियाँ हथौडा’ मा भोट हालेका कांग्रेसजनले संसदीय निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ३ मा राप्रपाको हलो चिन्हमा भोट हाल्नुपरेको थियो ।
पूर्वसांसद तथा जिल्ला सभापति उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले फेरि गलत निर्णय गरेर चुनावी तालमेलका नाममा चितवन कांग्रेसलाई कमजोर नबनाउन आग्रह गरे । ‘अनुशासित कार्यकर्ता भएकै कारण उबेला विद्रोह हुन सकेन, अब फेरी विगतको गल्ती दोहोर्‍याउन हुँदैन’, उनले भने । युवा नेता तथा जिल्ला सभापति उम्मेदवार कैलाश कोइरालाले षड्यन्त्रको राजनीतिको शिकार कांग्रेसीलाई बनाउने काम नदोहोर्‍याउन चेतावनी दिए । जिल्ला सभापति उम्मेदवार राजेश्वर खनालले चितवनमा बलियो कांग्रेस बनाउन कम्युनिष्टको बैशाखी टेक्न आवश्यक नरहेको बताए ।
कांग्रेस भरतपुर महानगर समिति सभापति उम्मेदवार भरत अधिकारी कांग्रेसले जित्ने बलियो आधार भएको महानगरमा फेरि चुनावी तालमेल भए चर्को विरोध हुने बताउँछन् । महानगरका सभापति उम्मेदवार हिरामणि अधिकारीले पनि कांग्रेसलाई पाखा लगाएर अन्य दललाई अगाडी बढाइए संस्थागत निर्णय गरेरै विद्रोह गरिने बताए ।
कहिले हथौडा, कहिले हलो !
चितवनका कांग्रेसजन वर्ष २०७४ लाई बिर्सन नसकिने बताउँछन् । यसको कारण हो रुखमा भोट दिन नपाउनु । स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादीको चिन्ह ‘गोलाकारभित्रको हसियाँ हथौडा’ मा भोट हालेका कांग्रेसजनले संसदीय निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ३ मा राप्रपाको हलो चिन्हमा भोट हाल्नुपरेको थियो । कांग्रेसको भोट पाएर प्रचण्डपुत्री रेणु भरतपुरको मेयरमा ४३ हजार १ सय २७ मत ल्याएर बिजयी भइन् ।
२०७४ कै संसदीय निर्वाचन अगाडि वाम गठबन्धन गर्न प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छोडेपछि पनि कांग्रेसजनले रुखमा भोट हाल्न पाएनन् । संसदीय निर्वाचनमा वामगठबन्धनबाट प्रचण्ड लडेको क्षेत्रमा कांग्रेसले राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई समर्थन गरेको थियो । त्यतिबेला चुनावी तालमेलको विरोध गर्न नसकेको चितवन कांग्रेसका सबैजसो नेताहरु अहिले ‘रुखमै भोट हाल्ने वातावरण बनाउँछु’भन्दै पार्टीको आन्तरिक निर्वाचमा होमिएका छन् ।
अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमै पुर्‍याउन-टिकाउन पनि माओवादीकै भूमिका छ । प्रचण्डकै समर्थनमा देउवा चौथो र पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । रेणु र प्रचण्डले भरतपुर र माडीमा विकासका ठूला योजनाहरु नभित्राएका होइनन्, विकासमा उल्लेख्य प्रगति पनि भएकै छ । तर, अब भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाल र क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रचण्डले फेरि अन्य दलको साथ पाउलान् या एक्लै भिडेर निर्वाचित हुन्छन् ? प्रश्न गर्नेहरू धेरै छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा देउवालाई गरेको गुन आगामी निर्वाचनमा फिर्ता हुने प्रचण्डको बुझाइ छ । केन्द्रमा मिलाउन सके जिल्लाका कांग्रेसजन रिझाउन आफूले सक्ने प्रचण्डले निकटस्थसँग बताउने गरेका छन् । प्रचण्डसँग पराजित राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे अब एमालेको साथ पाइन्छ की भनेर प्रयत्न गरिरहेका छन् । कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता भने पार्टीले गठबन्धनका नाममा फेरि अर्को पार्टीलाई क्षेत्र बुझाउने हो कि भन्ने चिन्तामै छन् ।
प्रकाशित: २०७८ भदौ ३१ गते १६:१९
One thought on “प्रचण्डको चुनावी रणनीति : कांग्रेस रिझाएर चितवन बनाउलान् त कम्फर्टेबल ?”
जबसम्म सेरबहादुरहरु पार्टी पर्मुख रहनेछन् ,सत्ताको बागडोर सम्हालिरहन्छन ,तबसम्म पार्टीको दुर्गति हुने सम्भावना बढिरहन्छ।